Microcement: wax baahida sare ee dunida ee dib u habaynta | Bezzia
Bezzia | 19/06/2022 08:48 | Qurxinta, Qurxinta qurxinta
El gurigu waa xarunta neerfaha ee fayoqabkeena, u adeegaya si loo dammaanad qaado in la hoos geeyo heerarka tayada nolosha ee aan u qalmay. Si loo kordhiyo qiyamka sida degenaanshaha, raaxada ama bilicda, Dib-u-habaynta dib-u-habaynta ayaa ah mid ka mid ah tallaabooyinka lagu qanco. Shaqo aan iskeed u horumarin karno haddii aan si taxadar leh u darsinno fursadaha kala duwan ee u badan suuqa hadda jira; sida microcement. Walax sii kordheysa oo caan ah oo isu taagtay dhidib ahaan falsafada DIY (laftaada samee).
1 Waa maxay microcement iyo halkee lagu rakibi karaa?
2 Waa maxay faa'iidooyinka microcement
Waa maxay microcement iyo halkee lagu rakibi karaa?
Marka aan go'aan ka gaarno dib-u-habeynta hal ama dhowr qol oo guriga ah, waxaa muhiim ah in la sameeyo falanqaynta alaabta kala duwan ee aan gacanta ku hayno. Marka sidaas la sameeyo, waxaan ugu dhakhsaha badan helay nafteena si siman ula micro micro: wax laga sameeyay sibidhka, resins, additives iyo pigments macdanta oo si buuxda loo habeyn karo. Maqaalkani waxa uu bedelayaa wax kasta oo adduunka ah ee naqshadeynta gudaha iyo, haddii aan maalgelinno microcement diyaar u ah isticmaalka, waxaan ku dabaqi karnaa annaga si ay u gaaraan heerar cusub oo qurxin heer sare ah.
Iyadoo agabka kale nagu qasbayaan in aan u qaadanno habab dhisme oo qaali ah, microcement-ku waxa ay raacdaa mowjadda DIY. Sidan, waxaan awood u leenahay inaan Dib-u-habaynta lagu sameeyo qolal kasta oo guriga ka mid ah iyada oo aan dhinacyo ay ka mid yihiin lacag iyo waqti nalagu soo gelin. Waxa intaa dheer, microcement ayaa lagu dabaqi karaa dhammaan noocyada dusha sare, oo ay ku jiraan tiles, tiles iyo plasterboard. Shaqo aan ku dhammaynno dhawr maalmood gudahood si aan ugu raaxaysanno meel cusub, oo leh nakhshad joogto ah oo ku habboon dhadhankayaga gaarka ah.
Codsiga microcement ayaa si gaar ah caan ugu ah musqulaha, iyada oo ay sabab u tahay awoodda ay u leedahay in ay baabi'iso kala-goysyada sagxadaha iyo darbiyada si ay uga baxdo muuqaalka joogtada ah. Si kastaba ha ahaatee, ku-tiirsanaan kasta oo hantidu waxay soo dhawaynaysaa alaabta gacmo furan, sida jikada, qolka jiifka, barxadda dibadda ama qolka fadhiga. Waxaas oo dhan ayaa awood u leh ku dooro xorriyad buuxda labadaba tonality iyo texture maaddadal. Si kale haddii loo dhigo, iyada oo ay ugu wacan tahay midabada kala duwan ee midabada ka soo jeeda soosaarayaasha midabka ugu muhiimsan, waxaan yeelan doonaa si sax ah naqshadeynta aan had iyo jeer ku riyooneyno.
Waa maxay faa'iidooyinka microcement
Inkasta oo ay run tahay in kala duwanaanshaha ku saabsan codsigeeda iyo midabada aan dooran karno ay tahay sabab ku filan oo loogu doodo qalabkan, Waxaan helnaa sababo kale oo badan oo mudan in la falanqeeyo. Maskaxda ku hay in qiimaha alaabtani aanu ahayn mid raqiis ah haddii aan la barbar dhigno fursadaha kale; si kastaba ha ahaatee, inagoo og inaan ku badbaadinayno shaqaaleysiinta mootada, waxaa cad inay tahay mid ka mid ah beddelka ugu jaban ee suuqa. Laakiin lacagtu maaha walaaca kaliya ee maskaxdeena inta lagu jiro cusboonaysiinta, sidaas darteed Aynu aragno kulliyadaha badan ee microcement.
Midka koowaad waa adhesion-ka cajiibka ah ee ay soo bandhigto dhammaan noocyada sagxadaha, ha ahaato mid toosan ama mid toosan ama gudaha iyo dibaddaba. Wax aan wakhti dheer qaadanayn in la dhaqan geliyo, iyada oo ay ugu wacan tahay sifooyinkeeda-dhakhso-qallajinta. Sidoo kale, waxaa xusid mudan tusmaheeda iska caabbinta sare, oo u adkeysan kara nabarrada, xagashada iyo garaacista Sida waxyaabo kale oo yar. Dhanka dayactirkeeda, microcement aad bay u fududahay in la nadiifiyo: kaliya biyo iyo saabuun dhexdhexaad ah ayaa loo baahan yahay. Faa'iidooyinka kala duwan, oo ay weheliso daryeelka deegaanka ee isticmaalkeedu ka kooban yahay, waxay ku dhiirrigeliyaan dad badan inay ku isticmaalaan guryahooda.
Markaa, hadda oo aad ogtahay wax kasta oo microcement ay kuu qaban karto, waa waqtigii aad wax baran lahayd waa maxay dukaamada ugu fiican ee lagu maalgalin karo alaabtan. Dabcan, waa meel u rogan gurigaaga kaas oo kaa dhigi doona inaad ku raaxaysato maalin kasta si buuxda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Bezzia » Qurxinta » Qurxinta qurxinta » Microcement: walxo baahida sare leh ee aduunka dib u habaynta